Shivaraj Online | पत्रकार पुडासैनीको मृत्यु प्रकरण पाेष्टमर्टम रिपोर्टमा के छ ? - Shivaraj Online पत्रकार पुडासैनीको मृत्यु प्रकरण पाेष्टमर्टम रिपोर्टमा के छ ? - Shivaraj Online
पत्रकार पुडासैनीको मृत्यु प्रकरण पाेष्टमर्टम रिपोर्टमा के छ ?
काठमाडौं । झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको पोस्टमार्टम रिपोर्ट चितवन प्रहरीमा पुगेको छ। तर, प्रहरीले रिपोर्टमा के छ भन्ने खुलाएको छैन ।